/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: Ubuntu Show
Labels: သတင်းများ, သိသမျှ, အြမင်များ, ေြကြငာြခင်း
Linux ဆိုတာဘာလဲ။ Ubuntu ဆိုတာဘာလဲ။ Linux နဲ့ Ubuntu ရဲ့ သမုိင်းေြကာင်း ဘယ်လုိအသုံးချရလဲ၊ ဘယ်လို ရယူနိုင်လဲ၊ ဘယ်ေလာက် အသုံးဝင်လဲ ။
အခမဲ့ရရှိနိုင်ြပီး၊ လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာအသုံးြပုနိုင်သည့် Linux OS, Ubuntu Distro အေြကာင်း သိေကာင်းစရာ ေဆွးေနွးပွဲအား အသုံးဝင်ပုံနှင့် အသုံးြပုပုံတို့အား ကိုယ်တိုင် Installation လုပ်ပုံလုပ်နည်း၊ Customization လုပ်နည်း (Windows Software များ/ Game/Effect များထည့်သွင်းြခင်း)လွယ်ကူစွာ အသုံးြပုနည်း ၊ အသုံးြပုရာတွင် ြဖစ်ေပါ်တတ်သည့် အခက်အခဲများ၊စသည်တို့ကို သာမန်အသုံးြပုသူများ အဆင်ေြပေစနိုင်ရန် Presentation များြဖင့် ေဆွးေနွးြခင်း၊ လက်ေတွ့ရှင်းလင်းြပသြခင်းများြဖင့် BAK Shopping Center တွင်ြပုလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် မည်သူမဆို လာေရာက်ေလ့လာ ေဆွးေနွးနိုင်ပါေြကာင်း ။
ပထမရက် (21-Nov စေနေန့) တွင် မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွင်ပုံမှန် ေဆွးေနွး ြပသမှုအြပင် Myanmar Linux Lab မှ ဆရာ ပိေတာက် Unicode ေဖာင့် Creator Keith Stribley မှ လာေရာက် ကူညီေဆွးေနွးေပးမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း ။
ဒုတိယရက် (22-Nov တနဂင်္ေနွေန့) တွင် ပုံမှန်ေဆွးေနွးမှုအြပင် ြမေစတီနှင့် ပိရပိုက် ယူနီကုဒ်ေဖာင့် တီထွင်သူ ကိုေငွထွန်းမှ Ubuntu တွင် Wikipedia Offline အသုံးြပုပုံကို ပါဝင်ြပသေပးမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း။
Wikipedia Offline DVD အေခွ 100 ခန့်ယူလာြပီး Distribute လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၂ ရက်ေန့တွင် Web Designer Htoo Tay Zar မှ Ubuntu မှ ရုပ်ပုံဖန်တီးမှုနှင့် တည်းြဖတ်မှုဆိုင်ရာ (EULA License - Photoshop နှင့် illustrator အစား အခမဲ့ OSS ြဖစ်ေသာ Gimp နှင့် Inkscape) ေဆာ့ဝဲများအား လက်ေတွ့ အသုံးြပုြပသမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း ။
ြပပွဲရက်နှစ်ရက်လုံးတွင် Ubuntu ေဆွးေနွးပွဲများအြပီး လက်ေတွ့ေလ့ကျင့်နိုင်ရန် စက်များ ြပင်ဆင်ထားရှိပါေြကာင်း။ ကိုယ်တိုင် Installation ြပုလုပ်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင် စက်အား Installation ြပုလုပ်လိုသူများ လာေရာက်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ Linux Document များအား အခမဲ့ မှျေဝနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါေြကာင်း။
Saturngod ၏ iPhone iTouch ေပါ်တွင် ြမန်မာေဖာင့်နှင့်လက်ကွက် အသုံးြပုနိုင်မည့် နည်းပညာအား အခမဲ့မှျေဝမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း ။ Myanmar Linux Lab မှ ြပပွဲရက်အတွင်း Discount ြဖင့် သင်တန်းအပ်လက်ခံမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း။
Microsoft Office အစားထိုးသုံးနိုင်ေသာ OpenOffice အား ြမန်မာဘာသာ ြဖင့်ြဖန့်ေဝေပးသွားပါမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း။ (Unicode5.1 / Zawgyi)
English-ြမန်မာ / ြမန်မာ-English အသုံးြပုနိုင်ေသာ wxPyDict Windows Dictionary (Unicode5.1 / Zawgyi)၊ Eng-Myan Ornagai Mobile Phone Dictionary (Java Application) ASCII မှ Unicode သို့ေြပာင်းေသာ Converter များ (Win- Font to Zawgyi or Unicode 5.1) စသြဖင့် အခမဲ့ Software များစွာ မှျေဝသွားမည်ရာ မည်သူမဆိုကူးယူနိုင်မည် ြဖစ်ပါေြကာင်း ။
Title: Ubuntu Free Show
Date: 21/22-11-2009 (Sat/Sun)
Location: BAK Shopping Center
Olympic Tower, 1 floor
Corner of Bo Aung Kyaw Rd And Mahar Bandoola Rd.
Kyauktadar Tsp. Yangon
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, November 20, 2009